UMadeleine McCann ngokwemilayezo engokomoya – JucelinoLuz
I-asguas de Lindoia, ngoJuni 14, 2021
UJucelino Luz, wathumela izincwadi eziningana mayelana necala likaMadeleine McCann, ngaphambi kokuba kwenzeke lapho eLuz – ePortugal, wacaphuna uChristian Brueckner, olahlwe yicala lobugebengu bezocansi ezinganeni, ukudlwengula nokushushumbisa izidakamizwa, wathi yize lo muntu enedumela elibi, ngeke abe umuntu owenze leli cala ebhekene nale ntombazane yaseNgilandi, manje useqinisekisile ukuthi amaphupho akhe ashaya inguqulo enikeziwe, lapho akhuluma khona okokuqala kusukela ngonyaka odlule waba umsolwa omkhulu ekulahlekeni kukaMadeleine McCann.
Encwadini eyakhishwa yi-tabloid Bild yaseJalimane ngoJuni 14, 2021, uBrueckner wabiza uphenyo ngaleli cala “ngehlazo” futhi wathi abaphenyi “bajaha umuntu ongenacala” ngakho-ke “kufanele ashiye phansi”.
Ngokwemininingwane yabashushisi baseGermany, kunobufakazi obuphathekayo bokuthi uMadeleine ushonile nokuthi bakhomba uChristian Brueckner njengoyena owabulala. Kodwa-ke, ukube babenobufakazi obuphathekayo ngabe babevele sebethule, kule ndaba, ukuthi ufile, lokhu kuyiqiniso, kusukela ngo-2007, uJucelino Luz, ukhombisa ezincwadini zakhe ukuthi le ntombazane yabulawa ngengozi, isidumbu sasifihlwe ILuz – iPortugal.
Okwamanje amaphoyisa aphenya izinsolo ezenziwe ngumuntu okholelwa ekutheni ungcwatshwe ehlathini eliseduze nasePraia de Luz, ePortugal, lapho kutholakala khona izinsalela zabanye abantu abalahlekile. UJucelino Luz, wathi kusukela ngo-2007, phambilini kulo mboni, ukuthi uzoba seLuz – uzongcwatshwa eduze nolwandle hhayi ehlathini. Isifunda siseduze nendawo yokuvakasha anyamalala kuyo ngoMeyi 2007.
UJucelino Luz wathumela izincwadi ezimbalwa exwayisa phambilini ukuthi uMadeleine uzonyamalala egumbini lakhe lokulala ngoMeyi 3, 2007, ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kosuku lwakhe lokuzalwa lwesi-4, esakhiweni esisogwini lwasePraia da Luz, esifundeni esiseningizimu ye-Algarve sisuka ePortugal.
Futhi ukuthi bekungeke kube ukuthunjwa, kepha ingozi yokusetshenziswa ngokweqile kwemithi, enikezwe le ngane ukuba ilale, kwaqondana, kwatholakala amaconsi afakwa egazini egumbini lapho intombazane yayikhona, noma ngabe kunjalo indawo lapho bekuhlala khona umsolwa uBrueckner, manje odonsa isigwebo ngecala lokudlwengula eGermany futhi onomlando wokuziphatha kabi ngokobulili kumlando wakhe wobugebengu. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi wenze leli cala. Esikwazi ukukuqonda ngukujaha ukuphothula leli cala phakathi kweziphathimandla zaseNgilandi nalo mshushisi omusha eJalimane – cha, siyazi ukuthi yini eyashukumisa le ntshisekelo enkulu kuleli cala, ngoba iqiniso lenzeka ePortugal – futhi yize eyisakhamuzi saseNgilandi, ungoweziphathimandla zasePortugal ukuthi uphenyo, olwahoxiswa, ngokusobala lwalunengcindezi, kanye nezintshisekelo zobunye – kubonakala selokhu kwanyamalala le ntombazane engenacala.
UMadeleine McCann wayezohlanganisa iminyaka engu-18 ngoMeyi 12, 2021. Abazali bakhe, uKate noGerry McCann, ngokusho kwezindaba emhlabeni wonke, basenethemba lokuthi indodakazi yabo iyaphila, kodwa-ke, impendulo kuleli cala ingaba nabo, uma iziphathimandla zasePortugal zingaphazanyiswa ukuxhumana kanye nomthelela ovela eNgilandi, ngakolunye uhlangothi, ngaphandle kokumangalela, noma kunjalo, abashushisi baseJalimane noma baseNgilandi, okungukuthi, amaphoyisa womabili la mazwe, abakaze baveze ubufakazi obubambekayo bokuthi le ntombazane ishonile. Futhi manje, kubonakala sengathi (umbono nombono ongokomoya), bafuna ukwethula isigebengu, okuthi kuleli cala, ngokusobala, simsulwa, sithethelele amaphutha siphothule uphenyo ngaleli cala. Kusekhona ukungabaza ukuthi bangaphakamisa isivumelwano nalesi sigebengu, ngomqondo wokuthi sithatha lokho esingakwenzanga, ukuze nje kuqedwe uphenyo, futhi ngaphezu kwakho konke, izigebengu zangempela, zizojeziswa.
Ukuhlonipha lezi zinsuku, siyazisola ngokushona kukaMaddie ongenacala ogama lakhe linguJucelino Luz wabhala umyalezo ongokomoya, ngaphambi kokuba anyamalale futhi anikeze izindaba ngaleli cala, abazilandelanga izinkomba ezinikeziwe, empeleni, babezigwema ngomqondo wokuthi ukufihla okungahle kwenzeke esikhathini esizayo eNgilandi. Manje, baletha imibiko ngomqondo wokuzama ukuqeda leli cala ngokukhombisa ukucabanga kanye namaqiniso angabazekayo. Ngikholwe, le ntombazane iyisisulu sephutha lomuthi, okwaholela esikhathini sayo sokufa.
UProfesa Jucelino Luz umcwaningi, umthelela nomhlahlandlela ongokomoya